Kedu ka esi aga Paris? - 1aviagem.com
Na post gara aga: A ga-amachibido ọgwụ caffeine na cocaine?
Nzipu ozo: Ekele nye Notre-Dame
Edebere 1 2019 June site Römulo Lucena
Dịka ekwere na ọkwa gara aga na oge ọzọ m gara kwuo maka Paris ga-ewetara gị ndụmọdụ ụfọdụ maka gị. (Ebe m na-eme nkwa a bụ nke a)
Ugbu a ọ bụ oge iji mezuo nkwa ahụ.
Ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ ịtọ ntọala gị na ebe ị ga-aga. Nke a pụtara ịmata ebe ụlọ nkwari akụ gị na ebe nleta nleta ị chọrọ ịga.
Ihe nke abuo ị ga-achọ bụ ịmata otú e si eji ụzọ ụgbọ oloko Paris. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie na Europe, ma ọ dị ezigbo mma na ọ bara uru ịkwaga n'etiti nlegharị anya n'obodo ahụ.
Otu nchọpụta dị mkpa bụ na e kewara ya na mpaghara. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ịchọrọ na mpaghara ndị gbara gburugburu na mpaghara 1, mpaghara 2 na mpaghara 1, mpaghara 3 na mpaghara ọzọ, mpaghara 4 na mpaghara ikpeazụ 5 bụ nke dịpụrụ adịpụ site n'etiti. (Lee akara gburugburu n'okpuru)
Metro bụ enyi gị ka ị gaa leta ndị njem nleta nke obodo ahụ, ị ​​ga-eji ihe ọzọ gaa na mpaghara 1, 2 na 3. A na-elekwasị anya ebe ndị dị ka Ụlọ Eiffel Tower, Arc de Triomphe, Notre Dame, Saint Chapel, Montmartre, Sacre-Coer na Ụlọ Ọhịa Louvre. N'ezie, Museum nke Louvre dị n'etiti Paris, dị nso na Notre Dame.
N'ikwu ya, oge eruola ịzụta tiketi ụgbọ oloko.
Debe ozi a site na mpaghara na okirikiri. N'ịmara na a na-eme ya site na mpaghara na okirikiri nke na-amụba n'ọtụtụ, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ nke tiketi ịzụta. ha na-ere ya site na mpaghara (tiketi nke 1 mpaghara, mpaghara 2, wdg) nakwa site n'ụdị njem.
Dị mkpa iji mesie ya ike na ZONES dị iche iche site na LINES. ya mere, anyị nwere mpaghara 5 na mpaghara 16 nke gafere ebe a. N'ezie, e si na 1 gaa 14, ebe ọ gbakwunyere 3 bis na 7 bis. Nke ahụ pụtara na anyị nwere usoro:
N'ebe a, anyị nwere ọtụtụ dịgasị iche iche na mkpebi ahụ na-esikwu ike ma na-akpata ụfọdụ mgbagwoju anya.
Anyị enweelarị tiketi, "ịnyịnya ibu" nke dị irè ruo mgbe 1h: 30 min mgbe nkwado mbụ ahụ, ya na ihe niile nwere ike ime n'ime mpaghara ahụ. 10 tiketi tiketi (njem otu), ego, ruo mgbe tiketi iji "gaa na Paris" dị mma maka ụbọchị 5, na-agafe nhọrọ nke ikikere 24.
Na ụdị ihe a niile dị iche iche nke 1, 2, 3, 4, 5 na-anọghị.
O doro anya na nhọrọ ọ bụla nwere ọnụahịa ya.
Ọ bụrụ na ịnọ na etiti nke Paris zụrụ ngọngọ nke tiketi 10 maka mpaghara 1. Na ha, ị nwere ike ịga ọtụtụ n'ime nlegharị anya ma laghachi n'ụlọ n'ebughị nchegbu banyere ụdị tiketi ndị a. Ọ na-abịa dị ọnụ ala karịa ịzụta ụbọchị niile.
Nke a dị mma iji gbanwee ọtụtụ ebe ndị njem nleta na mpaghara 1. Kedu tiketi ọ bara ya uru ruo na 1 hour na 30 nkeji mgbe ha gafechara akara nke mbụ. Na n'oge a, ntinye n'ime ụzọ ụgbọ ala ọ bụla dị irè n'enwetaghị ihe ọ bụla maka nke ahụ. Na n'oge a ị nwere ike iru ebe ahụ n'ụzọ dị mfe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụzọ na mkpa ịgbanwe ntuziaka mgbe ị banyerela.
Na mbụ njem na Paris, nke a bụ ihe siri ike ịghọta oge mbụ, mana anyị ga-akwụsị ịnweta ya, yana ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ ị ga-abụ akụkụ nke ya. Nakwa n'ihi na n'ime ụgbọ oloko e nwere ntinye aka nke ntụziaka nke ụzọ ụgbọ oloko. (Ogosi ikpeazụ nke akara bụ ntụziaka) na agba nke akara. N'ime ụgbọ ala ahụ, e nwekwara map na ọdụ ndị na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmara ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ị nọ na ntụziaka na-ezighi ezi, gbadaa, gbanwee usoro na-enweghị ahapụ ọdụ ma gaa n'ụzọ ziri ezi.
Metrô n'ime ime ihe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ maka tiketi oge 24, ị ghaghị imeju aha gị na aha ikpeazụ na igwe nke na-enye tiketi. Ntak-a? Iji gbochie onye ọzọ iji akara 24 gị ruo ọtụtụ awa.
(Ụla a bụ ihe atụ nke tiketi ụbọchị na-aga na mpaghara 1 na 2).
Ihe kachasị mkpa: Chekwaa ụgbọ ala ụzọ ụgbọ ala gị gaa na njedebe ikpeazụ. Ihe kpatara ya bụ na ọ dị mwute na e nwere ọtụtụ ndị na-emegharị akwụkwọ na-emeghe mechie iko mgbe ị gafechara tiketi ahụ. Ma na mbido, dịka na njikọta, mgbe ụfọdụ ọbụna na njedebe, mgbe ọpụpụ. (Ọpụpụ a na-akpọ ọpụpụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ n'ọdụ ụgbọ ahụ n'ihi na ị bịarutere ebe ị ga-aga, chọọ maka ụgbọ mmiri ahụ).
Ihe ọzọ: Ọ bụrụ na ị na-ebu nnukwu akpa, ụzọ ụgbọ ala nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kachasị mma maka gị. Ihe Mere? O jupụtara na steepụ, ịnweta agafewo na ọrụ ahụ. Akpa akwa nwere ike imekpa gị ahụ ma mee ka onye ọ bụla nwee nsogbu. Cheta na Paris bụ nnukwu obodo na-arụsi ọrụ ike, ọtụtụ ndị na-eji ụgbọ ala. Isi ebe a ga-abụ site na bọs, uber, tagzi si ọdụ ụgbọ elu gaa na nkwari akụ ma jiri obere akpa azụ na commutes n'ime ụzọ ụgbọ oloko. Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ka m na-eme njem site n'akpa aka, ọ gaghị enwe nnukwu nsogbu. Naanị ị ga-eburu ma bubata akpa akwa gị n'elu steepụ niile, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ gaghị eme ka ndụ ndị mmadụ kwụsị. Ị nwere ike ịga n'ihu na nzagharị.
Ufa, maka ịmatakwu banyere otu esi eji ụzọ ụgbọ oloko Paris ahapụ m njikọ ebe a:
E wezụga ụzọ ụgbọ oloko
Ugbu a, ịchọrọ ịmara ụzọ kacha mma ị ga-esi gaa Paris?
Ọ dị ụkwụ!
Nke ahụ dị mma, obodo ahụ mara ezigbo mma ma nwee ọtụtụ nke na ị nwere ike ịga ụkwụ n'ụzọ. ma laghachi n'okporo ụzọ ụgbọ ala mgbe ike gwụrụ gị.
N'ezie ndị a bụ ụzọ abụọ kachasị mma isi gafee Paris.
Ọ bụrụ na ị na-eteta obi ụtọ ma dịkwuo njikere ịga ije. Ọ bụrụ na ọ bụ ụzọ ị jisiri ike ịhụ ebe ị ga-ahụ njem nleta, gaa ụkwụ. Ọ bụrụ na ị na-eme obere mara mma, gaa ụkwụ. Ọ bụrụ na ebe dị nso na-aga ụkwụ.
Nke ahụ bụ n'ihi na dị ka m kwuru na post na mbụ, Paris dị ka ụlọ ngosi ihe ngosi na-emeghe. E nwere ihe oyiyi, isi iyi, ihe ncheta, ogige ntụrụndụ, ụlọ nke ụlọ, ihe nile dị ezigbo mma ịhụ. Ma ụzọ ụgbọ ala dị n'okpuru ala, yabụ ọ bụrụ na ị na-aga site na ụzọ ụgbọ oloko, ị nwere ike ịnọ na njem dị mma. Ya mere, canelinha gosipụtara (ụkwụ) bụ ụzọ kachasị mma isi mara obodo ahụ.
Hapụ ụzọ ụgbọ oloko:
Mgbe ọdachi dị anya ma ike gwụrụ gị.
Mgbe oyi na-atụ iji belata ntị.
Mgbe ị maghị ntụziaka ị ga-aga.
Mgbe ịchọrọ ịlaghachi n'ụlọ iji zuo ike.
Ogologo oge ole ka ị ga-ede iji mara obodo ahụ?
Echere m na nke kachasị dị mkpa bụ site na 4 ruo ụbọchị 5, mgbe obodo niile nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Ọ nwere ike ime ya na obere oge? Ee, ọ bụ, ma mgbe ahụ, ịkwesịrị iwepụkwu ume. Ma ọ nwere ike ịbụ nnukwu ọsọ.
Echere m na i nweela ya!
(Iji denye aha ma nata ozi ọhụrụ site na email na-abanye n'okpuru ma jikọọ na Facebook, Google, ma ọ bụ debanye aha email.
Olee otú cidade Olee otú Ụzọ ụgbọ oloko Paris tiketi